यी संकेतबाट थाहा हुन्छ गर्भमा छोरा छ कि छोरी ? - Onlines Time
छोरा या छोरी दुवै समान हुन् । हाम्रो समाजमा छोरा र छोरीमा गरिने भेदभाव तथा गर्भपतनका कारण गर्भवती महिलाको पेटमा रहेको बच्चाको लिङ्ग परिक्षण गरिनु गैरकानुनी मानिन्छ । तर, यदि भेदभावको दृष्टिकोणले नभई उत्सुकता मेटाउनको लागि छोरा र छोरी के छ भन्ने जानकारी लिन चाहेमा आफैले घरमा पनि अनुमान गर्न सकिन्छ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
वास्तु शास्त्रमा कयौँ उपाय बताइएको छ। जुन उपाय अपनाउँदा तपाईले जीवनमा कहिलै धनको कमी महशुस गर्नु पर्दैन्। यदी तपाईको आर्थिक अवस्था ठिक छैन र पैसाको संकट परिरहेको छ भने वास्तुका केही उपाय अपनाउन सक्नुहुनेछ। आज हामी तपाईलाई वास्तुका केही उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । जुन उपाय अपनाउनुभयो भने आर्थिक संकट हटेर जानेछ।
घरको प्रवेश द्वार यस्तो ठाउँ जसलाई आगमनको स्थान मानिन्छ। साथै सकारात्मक र नकारात्मक उर्जाको प्रवेश पनि यहीबाट हुने गर्दछ। यसरी नै धन वृद्धिमा प्रवेश द्वारको निकै महत्व हुने गर्दछ। त्यसैले विहान उठेर ढोका खोल्ने समयमा माता लक्ष्मीको स्मरण गर्नुहोस् र त्यसपछि ढोका खोल्नुहोस्। घरको ढोकालाई कालो रङ बाहेक अन्य कुनै डार्क रङले रङ्याउनुहोस्। चाहनुहुन्छ भने घरको ढोकामा रातो वा मरुन रङ लगाउन सक्नुहुनेछ। यो रङ शुभ मानिने गरिन्छ। यसो गर्दा घरमा आर्थिक सम्पन्नता बढ्ने गर्दछ।
Prevकुर्कुचा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? यो हो निको पार्ने विधि घरेलु बिधि ! मुक्ति पाउनका लागि….
Nextयस्ता व्याक्तीले झुक्किएर पनि नखानुहोस अण्डा,जान सक्छ ज्यान